Jaaliyadda Somaliland Ee Waqooyiga London Oo Casho Sharaf Ku Maamuusay Maareeyaha Telefishanka Qaranka + Sawiro | Salaan Media
Jaaliyadda Somaliland Ee Waqooyiga London Oo Casho Sharaf Ku Maamuusay Maareeyaha Telefishanka Qaranka + Sawiro
September 3, 2013 | Published by: Hamse
London (SM)cashadan oo ahayd casho sharaf iyo xogogaal-wareysi waxaa ka soo qayb galay madax ka socotey ururada iyo Bulshada reer Somaliland ee ku nool magaalada London, Melton Keynes iyo Manchester. Waxaa kale oo ka soo qayb galay Wakiilka Somaliland u fadhiya dalkan Ingiriiska Mudane Cali Aaden Cawaale. Waxaa barnaamujka xafladdan daadihinayey Mohamed Cumer Meygag.
waxaana hadal kooban oo duco iyo waano u badan ku furay xafladdaa guddoomiya ururka SSUK Abdalla Salim oo ku hadlayey magaca Jaaliyadda Somaliland. Waxaa kale oo hadallo kooban halkaa ka soo jeediyey Caasha Xuseen Maraykan, Amal Diiriye iyo shakhsiyaad kale oo ka tirsan Bulshada reer Somaliland ee Ingiriiska. Waxaa kale oo halkaa ka hadlay Mudane Cali Aden Cawaale oo ka waramay ahmiyadda ay leedahay in la sii xoojiyo wada-shaqaynta Xafiiska iyo bulshada reer Somaliland ee ku nool dalkan Ingiriiska.
Kadib waxaa halkaa hadal kooban ka soo jeediyey Mudane Khadar Xasan Cali Gaas oo ka waramay waxyaabihii u qabsoomay TV Qaran mudadii uu masuuliyaddiisa gacanta ku hayey iyo waxa ka qabyada ah. Iyada ay Qurbajoogga reer Somaliland inta badan casho sharaf ku soo dhaweeyaan Madaxda iyo wax garadka Somaliland marka ay yimaaddaan dalkan Ingiriiska haddana
waxay habeenkaas u noqotaa cashadaasi Gole ay su´aalo badan ku weydiiyaan oo ay dareenkooda ugu soo bandhigaan madaxdaa, sidaa daraadeed waxaa halkaa su´aalo badan lagu weydiiye, talooyinna loogu soo jeediyeen Mareeyaha TV Qaranka. Guud ahaan xafladdani waxay ahayd mid si quruxban u dhacday.